SON-TINH « MMWeather Information BLOG
TSR မှ ဗီယက်နန်၊ လာအို၊ တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများသို့ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်
By mmweather.ygn, on October 26th, 2012%
TSR မှ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံများသို့ မုန်တိုင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ အနီရောင်အဆင့် သတိပေးချက်၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ မြို့ကြီးအချို့သို့ အဝါရောင်အဆင့် သတိပေးချက်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ မြို့ကြီး အချို့တို့သို့ အစိမ်းရောင်အဆင့် သတိပေးချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
NW Pacific: Storm Alert issued at 26 Oct, 2012 6:00 GMT
Tropical Storm SON-TINH (24W) currently located near 14.8 N 114.5 E is forecast to . . . → Read More: TSR မှ ဗီယက်နန်၊ လာအို၊ တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများသို့ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်
Leaveacomment Uncategorized ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ 93W နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း SON-TINH
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W သည် ပို့ဘလဲယားမြို့ အရှေ့ဘက် ၄၅ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ(၇)မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
JTWC ခန့်မှန်းချက်များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W သည် အားကောင်းလာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသေးသော်လည်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန် မြင့်မားနေမှုက အားကောင်းလာစေနိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းအဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေ LOW အဆင့်မှာပင် ဆက်လက် ရှိနေသေးကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
93W . . . → Read More: ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ 93W နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း SON-TINH
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိ
By mmweather.ygn, on October 25th, 2012%
အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W သည် ယမန်နေ့ ညပိုင်းတွင် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် အနောက်တောင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ ကော့သောင်းမြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၁၉၀ ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
93W 24 Oct 2012 1800Z Location: 10.2 95.8 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
ကွန်ပျူတာ မော်ဒယ်များ၏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပုံဖေါ်မှု အရ(အောက်ပုံတွင် ကြည့်ပါ) လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W သည် ပို့ဘလဲယားကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ယနေ့ည ရောက်ရှိမည်
By mmweather.ygn, on October 24th, 2012%
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 93W သည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၅ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် မြိတ်မြို့ ပေါ်မှ ဖြတ်၍ မြောက် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားကာ ယနေ့ ညပိုင်းတွင် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
93W 24 Oct 2012 0600Z Location: 12.6 98.5 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း SOIN-TINH(ဖိလစ်ပိုင်အမည် OFEL) မှာ . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ယနေ့ည ရောက်ရှိမည်